Iincwadi ezilungileyo kakhulu, ezona zikhetha imisebenzi yamaxesha akutshanje | Uncwadi lwangoku
Kwiincwadi zangoku ziqondwa "ngeencwadi ezilungileyo Thriller”Kule misebenzi ibhalwe ngamanani amakhulu okrokra, ulindelo, ixhala kunye nemimangaliso. Ngaphandle kokubonisa iindinyana ukutolikwa kwazo kuyabhidisa, ababhali abadumileyo bale nxalenye yentsomi badla ngokudlala ngokuchaseneyo nomfundi.
Ngokwesiqhelo, Injongo yombhali kukwenza ukuba kubonakale kubabukeli ngesakhiwo esintsonkothileyo, esikhokelwa ngabalinganiswa abanobunzulu obukhulu bengqondo. Apho, akukho nto (into, umntu, imbono, useto, iinkcazo zemvakalelo ...) ezibekwe ngokungahleliwe, kwaye neyona nkcukacha incinci inokubaluleka kwesiphumo.
1 Uluhlu lweeNcwadi eziBalaseleyo zeTriller
1.1 Ingxelo yePelican (1992), nguJohn Grisham
1.2 Imfazwe kaHart (1999), nguJohn Katzenbach
1.3.1 Isiza kunye nomxholo
1.4 Ngelixa ulele (2011), ngu-Alberto Marini
1.5 Idoli yokulala (2012), nguJeffery Deaver
1.5.1 Isiza kunye nesishwankathelo
Uluhlu lweeNcwadi eziBalaseleyo zeTriller
Nalu uluhlu olupheleleyo lweencwadi ezimeleyo kolu hlobo:
Ingxelo ye-pelican (Ngo-1992), nguJohn Grisham
I-Pelican Brief NgesiNgesi- yinoveli yesithathu yombhali waseMelika ophumelele amabhaso kunye nezopolitiko John Grisham. Umbhali uthathwa njengereferensi engenakushenxiswa ngaphakathi koncwadi lwangoku lwaseMntla Melika kunye nenkcubeko ye-Anglo-Saxon pop ngokubanzi. Ayimangalisi loo nto, kuba, ngaphandle kokuthengisa iincwadi ezingaphezu kwezigidi ezingama-300, uhlengahlengiso kumabali abo lube yimpumelelo enkulu kwiofisi yebhokisi.
Lo msebenzi uqulethe zonke izinto ze- Thriller Amapolisa ajika athengise kakhulu. Oko kukuthi, abalinganiswa abanobunzulu bobuchwephesha bengqondo, ukukhula kunye nokujija okungalindelekanga kunye nesitayile sebali esothusayo njengokuba silikhoboka labafundi. Ewe awunakuphoswa sisibulala esineenkcukacha kunye neenjongo ezididayo wonke umntu ophela ebalini.
Kule meko, ukusweleka kokuqala (ekuthiwa kunxibelelene) zezo zejaji ezimbini ezibalaseleyo, enye yenkululeko kunye nomnye olondolozayo. Ngesi sizathu, Inkqubela phambili yophando ilandelwa ngokusondeleyo ngamajelo eendaba kunye noluntu. Ngaphandle kokuchaphazeleka kolwaphulo mthetho, umfundi wezomthetho (uDarby Shaw) ubonakala esombulula imibuzo ejikeleze ukubulala.
Ingxelo yePelican ...
Imfazwe kaHart (1999), nguJohn Katzenbach
Ngelixa uJohn Katzenbach esaziwa kwilizwe liphela Ingqondo yengqondo (2002)Oku akuthethi ukuba imisebenzi yakhe yangaphambili ayicacanga kangako. Inyaniso, Imfazwe kaHart yenye yeenoveli ezibalaseleyo zalo mbhali waseMelika ojolise kwizicatshulwa ezithandabuzekayo. Ukongeza, kule ncwadi uKatzenbach uphonononga ezinye zeemvakalelo ezisezantsi zomntu.
Ngexesha lobushushu beMfazwe yesibini (II) yeHlabathi, uLieutenant Tommy Hart wezoPhapho wabanjwa emva kokuba kuphela komntu owasindayo ekwehliseni iyunithi. Ugcinwe eStalag Luft 13 (eBavaria, eJamani) kunye namanye amajoni avela kwicala eliManyeneyo. Kungekudala emva koko, uHart ubukele amanye amabanjwa afumana ukufika kwebanjwa lase-Afrika-laseMelika, uLincoln Scott, enorhano.
Ngaphandle kokuba ekwangummeli wenkundla kwimikhosi emanyeneyo, uScott ucalucalulwa ngenxa yebala lakhe. Ukwenza izinto zibe mbi nangakumbi, elinye lamabanjwa lifunyenwe lifile kwaye uScott ubekwa ityala lolwaphulo-mthetho. Ke ngoko, UHart kufuneka asebenzise zonke izifundo zakhe zomthetho ukuzama ukusindisa abantu bakowabo kwisivakalisi esikrwada. Ukuba iyasilela, ijoni elingenakuzenzela nto lijamelana nokufa.
Imfazwe kaHart (MAXI)
I-Shutter Island (2003), nguDennis Lehane
Ihlobo lowe-1954; umhla wemfazwe ebandayo. Umkomishinara wase-US u-Teddy Daniels kunye neqabane lakhe u-Chuck Aule bafika kwisibhedlele i-Ashecliffe se-Criminally Ill kwiShutter Island. Bakumishini yokufumana imbacu eyingozi egama linguRachel Solano. Nangona kunjalo, inkanyamba yabetha esiqithini kungekudala emva kokufika kwabaphandi.
Kwisibhedlele akukho nto ibonakala ngathi ... Ngendlela efanayo, uDaniels ubonakala ene-ajenda yakhe ngokubhekisele kwiziko labagula ngengqondo. Kwaye ukuba unomdla kakhulu ekufumaneni malunga nezilingo zamachiza ovavanyo kunye notyando oluyingozi olwenziwa esibhedlele. Ukwengeza, Ubungqina obufihlakeleyo obuchasene nokuhlanjwa kwengqondo eSoviet kuyaphazamisa.
Njengoko uphando luqhubeka, u-Chuck uqala ukuzibuza ukuba-ukongeza kwiinkxalabo ezichaziweyo-UTeddy unezinye izizathu zokuza kwesi siqithi. Ngapha koko, le yeyona ngxaki yakho incinci, kuba baziva bekude kakhulu ekufumaneni inyani kwaye umntu unenjongo yokubaphambanisa… ngekhe bakwazi ukushiya iShutter Island.
Njengoko ulele (2011), nguAlberto Marini
Ekuqaleni, isicatshulwa se Njengoko ulele wakhawulwa kwiskripthi sefilimu engathandabuzekiyo ekhokelwa nguJaume Balagueró. Nangona kunjalo, umbhali uthathe isigqibo sokubhala inoveli ukuphonononga nzulu nzulu kwezengqondo zabalinganiswa abaphambili. Ngendlela efanayo, kwincwadi iMarinini inesithuba sokuchaza ngokweenkcukacha ezinye iimeko ezingaboniswanga kwifilimu.
UCillian, umphathi wendlu yesakhiwo eNew York, ngumntu okhohlakeleyo ongakwaziyo ukuziva anelisekile okanye aqonde ukuba ukhona. Kuyabonakala ukuba, ekuphela kwento ebonakala ngathi inika lo mlinganiswa ulonwabo kukonakalisa uvuyo lwabanye abantu. Ngesi sizathu, ucebisa ukonakalisa ubomi bukaClara, umqeshi weflethi 5B, onobuntu obuchasene naye ngokupheleleyo.
Kwi-inri enkulu ye-protagonist, uClara uhlala ejongene nobunzima ngesimo sengqondo esifanelekileyo kunye noncumo. Ngokulandelanayo, UCillian -unazo zonke izitshixo zesakhiwo ngenxa yokuba engumnini-emnyango-uqala umdlalo omdaka ukutshabalalisa uClara. Yinto eqhelekileyo (engekuko ukufa okanye ukungcungcuthekiswa), anqwenela ukuyenza xa engena endlwini yakhe ngelixa elele.
Njengoko ulele ...
Unodoli oleleyo (2012), nguJeffery Deaver
Ngo-1999, kuphela intombazana enye eyasindiswa ekubulaweni (efihliweyo phakathi koonodoli) nguDaniel Pell, owabulala yonke intsapho yakhe.. Ngesi sizathu, amajelo osasazo abhekisa kwintombazana encinci "njengonodoli abaleleyo." Ngokukwanjalo, uluvo loluntu lwabhaptiza umbulali njengo "nyana kaMason" ngenxa yeqela lakhe labalandeli abanenzondelelo yempambano abanokwazi ukumenza inkohlakalo.
Emva kwexesha, xa esi saphuli-mthetho sivalelwe saza sagocagocwa yiarhente uKathryn Dance - ingcali kulwimi lomzimba- woyika njengoko emrhalela. Isizathu: Pell ayisiyonto nje enye yokuxhaphaza. Ke, Xa uDaniel ebaleka ejele kwaye eqala kwakhona indlela yakhe yokubulala, uMdaniso unyanzelekile ukuba umzingele ... nangona umngcipheko wolusu lwakhe.
Unodoli oleleyo ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » Iincwadi ezilungileyo kakhulu
Ndiyifundile ingxelo ye-pelican kwithuba elidlulileyo, kwaye inyani iyamangalisa. Iyacetyiswa kubo bonke abathandi beli hlobo.
Ezona ncwadi zithandabuzekayo